News – Page 305 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
दिल्लीमा पार्कमा बसेका दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार
एजेन्सी । दिल्लीको अमनबिहार थापाक्षेत्रमा दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा चार जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ । पक्रा परेकामध्ये चार जना नाबालिग समेत सामेल छन् । प्रहरीले मेडिकल रिपोर्टमा सामूहिक बलात्कार भएको पुष्टि भएको जनाएको छ । पार्कमा आफ्ना साथीहरुसँग बसिरहेको समयमा उनीहरुमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । दिल्लीमा महिलाको सुरक्षाको विषय जहिले पनि प्रश्नको […]
भारतीय प्रहरीद्वारा हतियारसहित प्रवेश गरी नेपालीको घर खानतलासी, चार पक्राउ
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा भारतीय प्रहरीले हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरी घर खानतलासी गरेका छन् । गएराति कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका १४ भुडामा बर्दीमा नै हतियारसहित नेपाल आएका तीन जना र सादा पोसाकमा आएका एक जना भारतीय प्रहरीले घर खानतलासी गर्ने क्रममा पक्राउ परेका हुन् । हतियारसहित आएका भारतीय प्रहरीले स्थानीय झुपबहादुर शाही र थिरबहादुर शाहीको घरमा मोटरसाइकल […]
राष्ट्रपतिमाथि लाग्यो गोली हानी हत्या गरेको आरोप
एजेन्सी । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेमाथि डाभाओ शहरको मेयर भएका समयमा न्याय विभागका एक एजेन्टलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोप लागेको छ । इडगार माटोबाटो नामका एक स्वघोषित ‘डेथ स्क्वाड’ सदस्यले राष्ट्रपतिमाथि सो आरोप लगाएका हुन् । गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धमा संसदको माथिल्लो सदनमा बयान दिदैं उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । संसदको माथिल्लो सदन सिनेटले सो […]
प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्लीमा व्यस्त कार्यतालिका, महत्वपूर्ण भेट आज
काठमाडौं । भारतको चारदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार महत्वपूर्ण भेटघाट गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आजै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतसँग भेटघाट गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल बिहान ९ बजे राष्ट्रपति भवनमा भारतीय सेनाले दिने गार्ड अफ अनरमा सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रपति भवनबाट सिधै उनी महात्मा गान्धीको […]
Revolutionary students protest against PM Dahal’s India visit
Students from All Nepal National Independent Students Union (Revolutionary),asister-organization of the Communist Party of Nepal (Revolutionary Maoist) poured into the streets on Thursday against Prime Minister Pushpa Kamal Dahal’s state-visit to India. They staged their demonstrations at Shantibatika in the Capital at around3PM, an hour prior to PM Dahal’s India visit. […]
Posted in: English News, National News, News
भारतमा क्रान्तिको शंखघोष गर्ने चारु मजुमदार को थिए ?
काठमाडौं । चारु मजुमदार पश्चिम बंगालको एउटा गाउँ नक्सलबाडीका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका चर्चित नेता थिए । सन् १९१८ मा सिलिगुडीको सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएका उनले क्रान्तिको कठिन र संघर्षपूर्ण बाटो रोजे र जेलमा पाएको यातनाकै कारण उनले मृत्युवरण गर्न पुगे । सन् १९६७ मा सत्ताका विरुद्ध उनले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षको नाम हो, नक्सलबाडी आन्दोलन । […]
Posted in: Feature News, International News
प्रचण्डलाई ललिपप देखाएर चीनलाई पन्छाउने भारतको यस्तो योजना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारदेखि चार दिने भारतको राजकीय भ्रमण गर्दैै छन् । दाहालले आफ्नो भ्रमणका क्रममा कुनैपनि दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै सन्धी सम्झैता नगर्र्ने र पुराना सन्धी सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि भारतले नेपाललाई ललिपप देखाएर चीनलाई नेपालबाट पन्छाउने भारतीय खतरनाक रणनीतिको भारतीय मिडियाले नै खुलासा गरेका छन् […]
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण आजदेखि, के के गर्दैछन् दाहालले भारतमा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जम्बो टोलीका साथ बिहीबार भारतको नयाँदिल्ली जाने भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा दाहाल चार दिने भ्रमणमा जान लागेका हुन् । भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत उच्च प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । दाहालको भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयास हुने सरकारको […]